स्वास्थ संस्थामा प्रविधि छ, प्राविधिक छैनन् ! – इन्सेक
नवलपरासी(सुस्ता पूर्व) ०७५ कात्तिक १४ गते
देवचुली–१ स्थित दुम्कौली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा रहेको भिडियो एक्सरे मेसिन दक्ष जन शक्तिको अभावमा नियमित सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
एकवर्ष अघि खरिद गरिएको मेसिन सञ्चालन गर्ने रेडियोलोजिष्ट दरबन्दी नहुँदा नियमित रूपमा भिडियो एक्सरे हुन सकेको छैन् । उपचारका लागि स्वास्थ्य केन्द्र पुग्ने बिमारीहरू स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रविधि भएपनि प्राविधिकको अभावमा अन्य नीजि स्वास्थ केन्द्रहरूमा जान बाध्य छन् । स्वास्थ्य केन्द्रमा नै भिडियो एक्सरे गर्न सेवाग्राहीहरूले भरतपुरबाट आउने रेडियोलोजिष्ट पर्खनु पर्छ ।
अस्पतालले हप्तामा दुई पटक भरतपुर अस्पताल चितवनबाट रेडियोलोजिष्ट मगाई भिडियो एक्सरे सेवा दिने गरेको भएपनि पर्याप्त नभएको स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डा. त्रिभुवन भण्डारीले बताए । स्वास्थ्य केन्द्रमा नियमित गर्भ परीक्षणका लागि आउने सेवाग्राहीको लागि सोमबार र बिहीबार भरतपुरबाट आउने रेडियोलोजिष्टले सेवा प्रदान गर्ने गरेका छन् ।
तर, अन्य दिन आउने बिरामीहरूको लागि भने रेडियोलोजिष्टको अभावमा त्यो सुविधा अस्पतालले दिन नसकेको प्रमुख भण्डारीले बताए ।
स्वास्थ्य केन्द्रले आफ्नै आन्तरिक श्रोतबाट एकवर्ष अघि ९ लाख रुपियाँमा भिडियो एक्सरे मेसिन खरिद गरेको थियो । तर, स्वास्थ्य केन्द्रमा रेडियोलोजिष्टको दरबन्दी नहुँदा सो सेवा नियमित प्रदान गर्न सकेको छैन ।